"Nefa izaho matoky Anao, Jehovah ô; hoy izaho: Andriamanitro Ianao. Eo an-tànanao ny androko." Salamo 31:14,15
"Fa izay matoky an’i Jehovah kosa dia hohodidinin’ny famindrampo." Salamo 32:10
Tafahaona indray teo am-pialan-tsasatra izahay mpiara-miasa :
Manao ahoana daholo ianareo!
Toa manan-javatra holazaina aminay hono ianao?
Roa herinandro lasa izay, dia nisy fitiliana ara-pitsaboana natao tamiko, ka hita fa voan’ny homamiadana aho. Tsy maintsy nanomboka fitsaboana mahery vaika aho. Voatery handao anareo aho mandritra ny volana vitsivitsy, fara fahakeliny.
Nefa ianao ohatra ny salama tsara!
Nilaza tamiko ny iray tamin’ny dokotera hoe: Fantatrao ve fa tratran’ny zava-dratsy ianao? Ataoko fa fomba fijery iray izany, nefa misy fomba hafa koa azo ijerena azy. Navelan’Andriamanitra hitranga eo amin’ny fiainako izao. Tiany aho, ary misy zavatra tena ilaina nefa tsy hita any anaty boky na any amin’ny “internet”, tiany hampianarina ahy.
Hontsa avokoa izy rehetra… Hoy aho nanohy:
Marina tokoa fa tena mafy izao mahazo ahy izao. Nefa hanampy ahy handresy izany Andriamanitra. Izy no Ilay Mpanasitrana lehibe.
Nanana hery aho niresaka tamin’ny mpiara-miasa amiko, saingy avy eo dia niverina nieritreritra izay nolazaina teo: Tsy tonga saina ve aho? Sa mieboebo? Sa nilaozan’ny toetrandro ka mampifangaro an’Andriamanitra sy ny fitsaboana? Tsia, mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary ambonin’ny zavatra rehetra. Izay tiany hatao no ataony, ary tsy misy afaka miteny aminy hoe: “Inona izao ataonao izao?”
Noho ny fitiavany no nanomezany an’i Jesosy teo amin’ny hazofijaliana. Namela heloka ahy Andriamanitra ary nanangana ahy ho zanany. Tsaroako koa ireo zava-tsoa tsy tambo isaina narotsaky ny Tompo tamiko, tamin’ny lasa. Tsy fantatro ny hoaviko, saingy fantatro fa tsy mivadika ny Tompoko, miaraka amiko isanandro Izy, ary hampahery koa ireo olona akaiky ahy.